သွေးသွင်းရတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေ သိထားသင့်တယ်နော် ။ ။ - Hello Sayarwon
သွေး အုပ်စု ၄ခုရှိတယ်။ သွေးတွေက သူ့သွေးအမျိုးအစားတိုင်း သွင်းမှရတယ်ဆိုတော့ လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ့်သွေး အမျိုးအစားကို သေသေချာချာ တိတိကျကျ သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ သွေး အမျိုးအစားနဲ့ ပက်သက်ပြီး လူတိုင်း မသိသေးတဲ့အချက်တွေကို ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံး ဖတ်ကြည့်သင့်တယ်နော် ။ ။
သွေးအုပ်စု ကြီး ၄ ခုပဲရှိတယ်ဆိုတာ သေချာလို့လား။ ။
သွေး အမျိုးအစား ၄ မျိုးရှိတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ A B AB O ဆိုတဲ့ လေးမျိုးပေါ့။ ဒီ ၄ မျိုးကိုမှ အပေါင်းသွေး အနှုတ်သွေးလေးပါ ထပ်ထည့်လိုက်ရင် စုစုပေါင်း ၈ မျိုးကွဲသွားပါတယ်။ ဒီတော့ သွေး အုပ်စု ၈ ခုလောက်ရှိတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။ ကံကောင်းတာက လက်ထိပ်လေးတစ်ချက်ဖောက်လိုက်တာနဲ့တင် ကိုယ့်သွေး အမျိုးအစားကို လွယ်လွယ်ကူကူ အချိန်တိုတွင်း သိနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဘာ့ကြောင့် ကိုယ့်သွေး အမျိုးအစားကို သိထားဖို့လိုအပ်တာလဲ ။ ။
ကိုယ်ဘာသွေးလဲဆိုတာကို သိထားတဲ့အခါကျတော့ သွေးအမျိုးအစားအလိုက် ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကို ကြိုသိနိုင်မယ်၊ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်လို့ သွေးတွေလိုခဲ့ရင်လည်း ကြိုရှာထားလို့ရမယ်၊ သွေးမတူတာသွင်းမိတာမျိုးတွေလည်း မဖြစ်တော့ဘူး၊နောက်ပြီး ကိုယ်နဲ့ သွေးအမျိုးအစားချင်းတူတဲ့သူဆီကို သွေးလှူလို့လည်းရတော့ ဘယ်လောက် အကျိုးများလဲ။ ဒါ့ကြောင့် လက်ထိပ်လေး တစ်ချက်လောက်နာမှာကို တွေးကြောက်ပြီး ကိုယ်ဘာသွေးလဲဆိုတာကို မစစ်ဘဲမနေပါနဲ့။
သွေး အုပ်စုတွေ အားလုံးတူတဲ့အချက်ကဘာလဲ ။ ။
ဘယ်လို သွေး အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးတူတဲ့အချက်ကတော့ သူတို့မှာ အောက်ဆီဂျင်တွေ သယ်ပေးတဲ့ သွေးနီဥ၊ ရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ သွေးဖြူဥ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရရင် သွေးတိတ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ platelets နဲ့ သွေးဆဲလ်အားလုံး၊ ပရိုတင်းတွေနဲ့ ဓါတ်ဆားတွေကို သယ်ထားပေးတဲ့ သွေးရည်ကြည့်ဆိုတဲ့ ၄ ခုလုံးပါဝင်နေတဲ့အချက်ပါ။
ဘာ့ကြောင့် သွေး အမျိုးအစားတူတာတွေကိုပဲ သွင်းလို့ရတာလဲ။ ။
သွေးအုပ်စု ၈ မျိုးမှာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် antigens နဲ့ antibodies တွေရှိကြပါတယ်။ ဒီ antigens နဲ့ antibodies တွေကပဲ သွေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဓါတ်မတည့်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေတာပါ။ မြင်လွယ်အောင် ပြောရရင် A သွေးကို B သွေးပိုင်ရှင်ကိုယ်ထဲ ထည့်လို့မရတာ သူတို့ကြောင့်ပါ ။ ။ အဓိက ပြောရရင် သွေးတွေမှာပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအားလုံးနီးပါးတူပေမယ့် ဒီ antigens တွေကြောင့် အုပ်စုကွဲသွားပြီး ကိုက်ညီတဲ့ အမျိုးအစား အချင်းချင်းပဲ သွင်းလို့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Antigens တွေက ဘယ်လိုကွဲသွားတာလဲ ။ ။
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် ကွဲသွားတဲ့ antigens နဲ့ antibodies တွေကတော့
A သွေး – A သွေး မှာ A antigens ရှိပြီး B antibodies ပါပါတယ်။ Aသွေး အချင်းချင်းဆို တည့်ပြီး ပါဝင်တဲ့ B antibodies ကြောင့် B antigens ပါတဲ့ သွေး အမျိုးအစားတွေနဲ့တော့ မတည့်ပါဘူး။
B သွေး – B သွေး မှာ B antigens ရှိပြီး A antibodies ပါပါတယ်။ B သွေး အချင်းချင်းဆို တည့်ပြီး ပါဝင်တဲ့ A antibodies ကြောင့် A antigens ပါတဲ့ သွေး အမျိုးအစားတွေနဲ့တော့ မတည့်ပါဘူး။
AB သွေး – AB သွေးမှာတော့ A antigens နဲ့ B antigens နှစ်မျိုးလုံးရှိပြီး antibodies မရှိပါဘူး။ AB သွေးပိုင်ရှင်တွေက antigens ၂ မျိုးတောင်ရှိတာဆိုတော့ သူ့သွေးကို သူများထဲ ထည့်ပေးရင် ဓါတ်မတည့်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် antibodies မရှိတဲ့အတွက် သူ့ဆီကိုတော့ ကြိုက်တဲ့သွေး ထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ကို universal receiver လက်ခံသူသွေးလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
O သွေး – O သွေးကတော့ AB သွေးရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ O သွေးမှာ A antigens ရော B antigens မရှိတဲ့အတွက် ကြိုက်တဲ့သူတွေဆီကို သွေးပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဆီမှာ A antibodies ရော B antibodies ရော ၂ မျိုးလုံးရှိတဲ့အတွက် သူ့ထဲကိုတော့ O သွေး အချင်းချင်းပဲ ထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ကို universal donar အလှူရှင်သွေးလို့ ခေါ်ကြတာပါ။
ဒီ သွေးတွေထဲက antigens တွေ antibodies တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူကတော့ သြစတီးယားနိုင်ငံသားဆရာဝန် Karl Landsteiner ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၁၉၃၀ ခုနှစ်မှာ ဆေးပညာရှေ့ဆောင်လမ်းပြ နိုဘယ်လ်ဆုကို ဒီသွေး အမျိုးအစားကြောင့်ပဲ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အပေါင်းသွေ းအနှုတ်သွေးကရော ဘာလဲ ။ ။
အပေါင်းသွေး အနှုတ်သွေးဆိုတာ Rh + နဲ့ Rh – ကိုပြောချင်တာပါ။ Rh ဆိုတာ သွေးရည်ကြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ပရိုတင်း တစ်မျိုးပါ။ + နဲ့ – ကွဲနေတယ်ဆိုတည်းက သူတို့ နှစ်ခုဟာ အရောမခံဘူးဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ အပေါင်းသွေးဆိုရင်တော့ ပြဿနာမရှိပေမယ့် အနှုတ်သွေးပိုင်ရှင်တွေ အတွက်ကတော့ သွေးသွင်းချိန်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွေမှာ သတိကြီးကြီးထားရမှာပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေဆိုရင်လည်း မိခင်က အနှုတ်သွေး ပထမကိုယ်ဝန် ကလေးက အပေါင်းသွေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ အပေါင်ေးသွးကိုတိုက်တဲ့ antibodies တွေ မိခင်ကိုယ်ထဲ ထွက်နေပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ပထမကလေးကို မတိုက်သေးပါဘူး။ ကံဆိုးတာက ဒုတိယကိုယ်ဝန်ပါ။ ဒုတိယ ကိုယ်ဝန် ကလေးရဲ့ သွေးက အပေါင်းသွေးထပ်ဖြစ်ခဲ့ဦးမယ်ဆိုရင်တော့ မိခင်ရဲ့ သွေးနဲ့ ကလေးသွေး တိုက်ကြပြီး ကလေးပျက်ကျတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် လှူနိုင် ၊ လက်ခံနိုင်တဲ့ သွေးများ ။ ။
သွေးအမျိုးအစား လှူနိုင်သောသွေး လက်ခံနိုင်သောသွေး
A + သွေး A+ ( ဒါမှမဟုတ် ) AB + ဆီကို သွေးလှူလို့ရပါတယ်။ A+ A-, O+ နဲ့ O- ဆီကသွေးတွေ လက်ခံလို့ရပါတယ်။
A- သွေး A+, A-, AB+,နဲ့ AB-.
A- နဲ့ O-
B+ သွေး B+ နဲ့ AB+
B+, B-, O+, နဲ့ O-
B- သွေး B+, B-, AB+, နဲ့ AB-
B- နဲ့ O-
AB+ သွေး AB+ ဆီကို သွေးလှူလို့ရပါတယ်။
ကျန်တဲ့ သွေးတွေဆီက အကုန် လက်ခံလို့ရပါတယ်။
AB- သွေး AB+ နဲ့ AB-.
AB-, A-, B-, နဲ့ O-
O+ သွေး O+, A+, B+, နဲ့AB+.
O+ နဲ့ O-.
O- သွေး ကြိုက်တဲ့ဆီကို သွေးလှူနိုင်ပါတယ်။ O- သွေးတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ လက်ခံလို့ရပါတယ်။ ။
အပေါင်းသွေး, အနှုတ်သွေး (Rh antibodies) စစ်ဆေးခြင်းဆိုတာဘာလဲ